LV ABC USB Suspension mwekota, Njedebe-1500
LV ABC USB Suspension mwekota Njedebe-1500 iji itinye LV-ABC edoghi na a gwara mmanụ na-anọpụ iche ozi elu okporo osisi ma ọ bụ mgbidi, maka akụkụ ruo 30 Celsius kwupụta osisi na aka 50 Celsius n'ebe osisi.
1. ibughari njikọ na-enye ohere na eluigwe na ala ije nke mwekota ahu. Njedebe-1500 maka ABC mains nakwa dị ka sub-mains.
2. Otu format, na-enyere linesmen site nghọta na-anọpụ iche ozi na-emeghe ọnọdụ.
3. Njedebe-1500-enye ohere ngwa echichi site kpochidoro mgbanwe adịgide clip n'agbanyeghị dị iche iche cable nha.
4. Njedebe-1500 na-ọnọ na aluminum nkwusioru mgbodo Njedebe-1500 , nke-enye ohere mfe nrụnye na LV ABC nko, pigtails, mkpọchi anaghị agba nchara eriri nke 20 × 0,7 mm.
Suspension nzukọ Njedebe-1500 dị ma iche iche.
5. Toolfree echichi na-enye ya bụ universality.
5. Materials: corrosion eguzogide aluminum akụkụ, elu n'ibu na onodu ubochi eguzogide thermoplastic ihe.
Product koodu USB size, mm2 MBL, kN Ibu ibu. kg
Njedebe-1500 (pl) 10 - 95 9 0,180
Previous: Efefe USB Suspension Assembly, PS-1500
Osote: Low voltaji gwara mmanụ USB Suspension mwekota, PS-25-95
USB Suspension mwekota
LV ABC USB eji jikọta
LV ABC USB Suspension mwekota
LV-ABC akara mwekota
nkwusioru mgbodo Njedebe-1500
Suspension mwekota PS-1500
Suspension airdac mwekota Njedebe-1500.1